नेपाल आज | तानाशाहको युद्ध सल्लाहकार ज्योतिष !
विचित्र विश्व विचार विदेश
बिहिबार, १२ असार २०७६ गते प्रकाशित - नेपाल आज (ADM)
एउटा सत्यकथा । आश्चर्यलाग्दो यथार्थ । विश्वका कुख्यात तानाशाहहरु पनि भाग्य र ज्योतिषशास्त्रमा विश्वास राख्थे । युद्धको सञ्चालन तिथि, मितिजस्ता कुराहरु आफ्नो कुण्डली हेराएर फलाफल खुट्याएर निर्धारण गर्थे । नेपालमा पनि नेताहरुका त्यस्ता गतिविधि देखिएका छन् । आफूलाई नास्तिक र भौतिकवादको जामा लगाएर जिन्दगी गालेका नेताहरु जीवनको उत्तराद्र्धमा अध्यात्मावादी बनेका उदाहरण छन् । पुराना कम्युनिष्ट नेता मोहनचन्द्र अधिकारीले त्यही मेलो समातेका छन् । महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा आफूलाई चरम नास्तिकवादी भनेर चिनाए । जीवनको अन्तिम कालमा कविताको हरफ नै लेख्दै भने– ‘आखिर श्रीकृष्ण रहेछ एक ।’
जर्मन तानाशाह हिटलरले युद्धारम्भपूर्व आफ्नो युद्ध कार्यालयमा ज्योतिष विभाग स्थापना गरेका थिए । कालिदासको शाकुन्तल महाकाव्य पटक पटक पढेका हिटलर समयक्रमसंगै आर्यनको वकालत गरे । पूर्वीय दर्शनमा उनको रुचिमात्र हैन, रुझान थियो । यसैको प्रभाव हुनुपर्छ, युद्ध अवधिमा ग्रह, नक्षत्र छुट्याएर हिटरलाई सल्लाह दिन पाँच ज्योतिष नियुक्त गरिएका थिए । यिनीहरु दिनरात गणना कार्यमा रहन्थे । र, युद्धसम्बन्धी कुनै कदम चाल्नुअघि अनिवार्य राय मागिन्थ्यो ।
अझ रमाइलो त के भयो भने तात्कालिन बेलायती प्रधानमन्त्री चर्चिलले पनि ब्रिटिस जासुस संयन्त्रमार्फत आफ्नो कार्यालयमा युद्ध सम्बन्धी रिपोर्ट प्राप्त गर्न ज्योतिष विभाग स्थापना गरे । चर्चिलको भनाइ थियो– ‘ज्योतिषहरुको सम्बन्धमा हिटलरको मात्र एकलौटी अधिकार हुनु हुँदैन् ।’ त्यसबेला विश्वयुद्ध शुरु भएको थिएन् । एक साँझ स्पेनको दूतावासमा पार्टीको बहस, पैरवी चल्दै थियो । बेलायती विदेश सचिव लर्ड ह्यालिफ्याक्सको छेउमा एक आकर्षक व्यक्ति बसेका थिए । तिनी अन्दाजी ४० वर्ष जति लाग्थे । यतिक्कैमा स्पेनी राजदूतले ती व्यक्तिका नजिक गएर भने– ‘तपाईंको भविष्यवाणीअनुसार युद्ध थालियो । यदि हिटलरले पोल्याण्डमाथि आक्रमण गर्यो भने म तपाईंको सेवा प्राप्तिका लागि सरकारसंग शिफारिस गरुँला ।’
लुईस डी ओहल हंगेरी निवासी घोडचढी सैनिक अधिकारीका पुत्र थिए । उनलाई बाल्यकालदेखि नै धार्मिक संस्कार प्राप्त भएको थियो । उनले आफ्नै प्रयत्नमा विश्व प्रसिद्ध व्यक्तिहरु हिटलर, चर्चिल, चेम्बरेल, मुसोलिनीहरुको जन्मकुण्डली बनाएका थिए । सन् १९३१ मा उनले हिटलरका सम्बन्धमा गरेका सबै भविष्यवाणी सफल भएको बताइन्छ । उनले भविष्यवाणी गरेभन्दा तीन दिनअघि मात्र विश्वयुद्ध शुरु भयो । र महिना दिनभित्रै हिटलरले पोल्याण्डमाथि कब्जा गर्यो । सन् १९४० को कुरा हो– डी ओहल सेनामा भर्ती भइसकेका थिए । अगष्ट महिनाको उकदिन उनलाई युद्ध कार्यालयमा बोलाएर क्याप्टेनको पद सुम्पिएर ज्योतिष विभागको प्रमुख बनाइयो ।
यता हिटलरको ज्योतिष विभागको प्रमुख विलियम क्राफ्ट थिए । डी अहिलले यस पूर्व क्राफ्ट अन्तर्गत रहेर काम गरिसकेका थिए । तसर्थ उनलाई क्राफ्टको ज्योतिष गणना पद्धति सम्बन्धमा राम्रो ज्ञान थियो । अनि उनलाई क्राफ्ट कुन पद्धतिअनुसार गणना गर्दैछन र हिटलरलाई के सल्लाह दिन्छन् भन्ने थाहा पाउन कुनै कठिनाई भएन ।
सन् १९४० को शुरुवातमा डी ओहलले हिटलरले इङ्ल्याण्डमाथि कहिल्यै आक्रमण नगर्ने भविष्यवाणी गरेका थिए । उनले कामको दोस्रो चरणमा आफ्ना पक्षका प्रमुख उच्चाधिकारीहरुको जन्म कुण्डली बनाउन थाले । तर त्यसका लागि आवश्यक पर्ने उनीहरुको जन्म, तिथि, गते, बार समय कहाँ पाउनु ? यतिक्कैमा युद्ध चौथो वर्षमा चल्न थाल्यो । जुन १९४२ को साँझ एक सैनिक अधिकारीले दुईजना मानिसको जन्मतिथि र समय ल्याएर डी ओहललाई दिए । तर उनीहरुको नाम बताउन अस्वीकार गर्यो । उनले ती गणना गरेपछि दुवैको पेशा र चरित्रमा समानता पाए । यसमध्ये जुन चाहिँ अति भलाद्मी जस्तो बताउँथ्यो । उसले भविष्यमा उन्नति र सम्मानको शिखर छुने देखिन्थ्यो । अर्को पनि कुशल प्रतिभाशाली साहसी र पराक्रमी थियो । तर निकट भविष्यमा उसको पतन हुने देखिन्थ्यो । पहिलो व्यक्ति थियो– मित्रपक्षका फिल्ड मार्शल मोटङ गोभरी र अर्को थियो हिटलरको अफ्रिका अभियानको प्रसिद्ध कर्णधार फिल्ड मार्शल रोमेल । नभन्दै यी दुवै भविष्यवाणी सत्य प्रमाणित भए । सन् १९४४ मा उनले अर्को भविष्यवाणी गरे– एक यस्तो ऐतिहासिक घटना हुने वाला छ, जुन चाहिँ सामुद्रिक युद्ध इतिहासमा स्वर्णाक्षरले लेखिने छ ।
अक्टोबर १९४४ मा यति विशाल सामुद्रिक युद्ध भयो, जुन युद्धमा जापानको सम्पूर्ण जलसैन्य शक्ति सदाको निम्ति समाप्त भयो । उनले चर्चिलको जन्मकुण्डली हेरेर भनेका थिए– ‘युद्धपछि उनका खराब दिन शुरु हुने छन् ।’ आखिर यस्तै भयो पनि । सन् १९४५ को आमचुनावमा चर्चिलको कन्जरभेटिभ पार्टी नराम्रोसंग धुलो चाट्न पुग्यो । युद्धपछि लुईस डी ओहललाई ठूलो सामाजिक सम्मान प्राप्त भयो । यसको विपरीत हिटलरका प्रमुख ज्योतिषी विलियम क्राफ्टलाई नोकरीबाट खारेज गरी यातना शिविरमा लगियो । उनको त्यहीँ प्राणान्त भयो ।
हिटलर बेलायती प्रधानमन्त्री चर्चिल